Luul Faraha Biyoodka luul biyoodka waxaa loola jeedaa luulka laga soo saaray webiyada iyo webiyada. Meelaha ugu badan ee lagu beero luul macaan ee Shiinaha waa Zhuji, Changde, Suzhou, Jiangxi, Hubei, iyo Anhui. Xilligan, luul biyo macaan ayaa badanaa ...
Ilaha Pearl Shiinaha waa soo saaraha ugu weyn ee luul biyo macaan, wax soo saarkeeduna wuxuu u dhigmaa 95% wax soo saarka adduunka. Barwaaqada iyo horumarka warshadaha luul waxay siisaa fursado wax sii qabadsiinta Chine ...
Waxyaabaha jirka lagu yaqaan ee luul
Waxyaabaha jireed ee luul Dhalaalka gaarka ah ee luul waxaa sababa milicsiga iyo kala-soocida iftiinka lakabyadan nacreous hufan. Khafiifka ah lakabka nacreous, ayaa ka qurux badan dhalaalka. Iftiinka ...
Taxaddarrada xidhashada iyo badbaadinta dahabka luul
Taxaddarrada xirashada iyo keydinta waxyaabaha la isku qurxiyo ee luul Inta lagu jiro Xirashada 1. Luulku waa inaysan taaban biyo si joogto ah, waana in laga saaraa marka la qubaysanayo. Luulluhu wuxuu xiriir la leeyahay asiidh iyo waxyaalaha lagu nadiifiyo alkaline sida shaamboo ...
Daryeelka Dahabka & Digniinta: Xasaasiyadda Dahabka
Daryeelka Dahabka & Digniinta: Xasaasiyadda Dahabka Dheer dahabkaaga ugu dambeeya, oo marka hore iska sii. Had iyo jeer iska saar waxyaabaha aad isku qurxiso marka aad jimicsiga sameyneyso iyo marka aad dabaashaneyso, iyo marka aad jimicsiga sameyneyso. Marar badan ku nadiifi dahabkaaga maro nadiifinta. Keydso j ...
Qaabka luulka biyaha macaan
Qaabka luul biyo macaan Luul biyoodku wuxuu ku yimaadaa runti aan xad lahayn oo ah qaabab wareega wareegsan ilaa baroque iyo waxkasta oo udhaxeeya. Helitaankooda iyo qiimaha la awoodi karo awgeed waxay ka mid yihiin kuwa ugu ...
Sida loo kala saaro luulka biyaha macaan
Sida loo kala saaro luulka biyaha macaan # 1. U fiirsasho Waxaa lagu kala soocay midabka, qaabka, cabirka iyo dhaldhalaalka luulka. Jawhar dhab ah, midab, qaab, iyo cabir ahaan isku mid ma aha. Luul been abuur ah ayaa lagu tuuraa mol mashiin ...
Saamaynta xirashada dahabka luul
Saamaynta ay leedahay xirashada dahabka luul Dumarku waxay jecel yihiin inay dhinac ka xirtaan dahabka luul maxaa yeelay waa jaalle oo diiran, taasoo ka ciyaari karta door qurxin aad u wanaagsan, dhanka kale, maxaa yeelay waxay leedahay qaddar faa'iidooyin ah oo loogu talagalay ...